13 × 07 Podcast: Inguva yeMac | Ndinobva mac
Podcast 13 × 07: Inguva yeMac
Tinoda kugovana nemi mose imwezve episode yepodcast irimo takataura kwenguva refu nezve chiitiko cheMac kuti tichava neMuvhuro unotevera, Gumiguru 18. Iwo maMacs matsva, echizvarwa chechitatu-chizvarwa AirPods, uye zvimwe zvakawanda.
Nezuro takaungana zvakare ku ita iyo # podcastApple irarame Vhiki rino. Nguva pfupi yapfuura isu tinoita podcasts neChitatu asi harisi zuva chairo chero nekuti tinovimba nezvekunze zvinhu kuti tiungane kurekodha.
Isu tinogovana vhidhiyo yeYedu YouTube chiteshi pano kuitira kana chero mumwe wenyu achida kuzviona:
Kana iwe uine chero mibvunzo kana mazano uye iwe uchifunga kuti tinogona kutaura nezvazvo pane podcast iwe unogona kuzviita kurarama kuburikidza nehurukuro inowanika paYouTube, uchishandisa hashtag #podcastapple pa Twitter kana kubva teregiramu yedu chiteshi, yazvinofanira kucherechedzwa ndeye mahara kune wese munhu uye isu tiri vazhinji uye vazhinji.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » dzakawanda » Podcast 13 × 07: Inguva yeMac
Apple inowedzera rimwe gore kuchirongwa chekugadzira AirPods Pro
Iyo Apple Watch Series 7 charger inogadzirwa nealuminium pachinzvimbo chepurasitiki